June 16, 2021 - Online Hartha
ကမ်ဘာတှငျ ကပျကွီးသုံးပါး ပွငျးထနျစှာဖွဈမညျ့အကွောငျးကို ကွိုတငျဟောကွားခဲ့သော လယျတီဆရာတျောဘုရားကွီး
June 16, 2021 by Online Hartha
ကမ္ဘာတွင် ကပ်ကြီးသုံးပါး ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်မည့် အကြောင်းကို ခရစ်နှစ် (1910)ခန့်ကကြိုတင် ဟောကြားခဲ့သော လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး မြန်မာပြည်အား အင်္ဂလိပ်တို့ အုပ်ချုပ်သော ကိုလိုနီခေတ်တွင် လယ်တီဆရာတော် ဘုရားသီတင်းသုံးနေသော ကျောင်းသို့အင်္ဂလိပ် နယ်ပိုင်မင်း သမီး ” မက်ကလပ် မေရီ” တစ်ယောက် ရောက်ရှိလာသည်။ ထိုအင်္ဂလိပ် အမျိုးသမီးသည် ခရစ်ယာန် မှ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကူးပြောင်း သက်ဝင်ယုံကြည်သဖြင့်လယ်တီဆရာတော် ကို အလွန်မှပင် ယုံကြည်ကိုးကွယ်လေသည်။ သူမ၏ အဖေနယ်ပိုင်မင်းသည် မြန်မာပြည်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ တာဝန်ကျသဖြင့်သူမသည်လည်း မြန်မာပြည်တွင် မွေးဖွားကာ မြန်မာစကားကို ရေလည်စွာ တတ်ကျွမ်းလေသည်။ မေရီသည် လယ်တီဆရာတော်ဘုရားအား ရှိခိုးပြီး မနေ့ည က သူမထူးဆန်းစွာမက်သောအိမ်မက်ဆိုးကြီးကို သုံးခုအား ဆရာတော်ထံ လျောက်ထားလေသည်။ ရဟန္တာ ဖြစ်သော လယ်တီဆရာတော် … Read more
အဖြစ်များလှတဲ့ အမျိုးသမီးရောဂါများအတွက် အစွမ်းထက် နို့ပလောင်သီး
အဖြစ်များလှတဲ့ အမျိုးသမီးရောဂါများအတွက် အစွမ်းထက် နို့ပလောင်သီး အမျိုးသမိး ရင်သား အဖု အကျိတ် ၊အဆီကျိတ် ၊ အချားအကျိတ်အမျိုးမျိုးကို ဆန်ဆေးရည်၊ နှင့် နို့ပလောင်သီးကို ခပ်ပြစ်ပြစ်လေးသွေးပြိး ခဏ ခဏလိမ်းပေးမည်ဆိုပါက သာမန်အကျိပ်ဆို တရက် နှစ်ရက်နဲ့ပျောက်ပါတယ်။ရင်သား အကျိတ် ၊ အဆီကျိတ် များအနေနဲ့ကတော့ခန ခန လိမ်းပြီးချေပေးပါ။ မခွဲမစိပ်ရဘဲ သေးသေးပြီးပျောက်သွားပါလိမ့်မည်။လက်တွေ့လိမ်းပြိး ကျန်တာ ကိုစိုက်ထားပြီးပြန်လည်မျှဝေတာပါ။ ရောင်းစားသူ မဟုတ် ပါ။စေတနာဖြင့် တင်ပြပေး တာ မိမိမှာရှိရင်မျှဝေခြင်းဖြင့် ကုသိုလ်ယူပါ။ ကောက်ရင်ပန်းသီးမဟုတ်ပါ။မြောက်ဥမဟုပ်ပါ။စားရင်ခါးပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန် ။ph09664050522 ကိုဆက်တောင်းယူပါ၊ ဆေးသီး လှုပါသည်၊ တံဆာခခံယူပါ။ပုို့စ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သော ဆေးဝါးဒါန ပေးလှူသူအားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်…။ Unicode Version အဖွဈမြားလှတဲ့ အမြိုးသမီးရောဂါမြားအတှကျ အစှမျးထကျ နို့ပလောငျသီး အမြိုးသမိး ရငျသား အဖု … Read more
ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးသတိပေးချက်…ငှက်,တိရစ္ဆာန်စားပြီးသား အသီးများရှောင်ရန်
ငှက်,တိရစ္ဆာန်စားပြီးသား အသီးများရှောင်ရန် အသီးအနှံတွေအပင်ပေါ်မှာ မှည့်ရင်ပိုချိုတယ်မှည့်ပြီးဆို အရင်ဆုံး လင်းနို့ /ရှဉ့် တို့က စားတယ် ကျန်ခဲ့တာကလေး/လူကြီးတွေက သူတို့စားထားတာပိုချိုတယ်စားကြတာမြင်ဘူးတယ် ပိုးဟပ် ကြွက် အိမ်မြောင် စားပြီးသားလှီးပြီးလည်းမစားသင့်ပါ တိရစ္ဆာန်ဆီကကျန်ခဲ့တဲ့ရောဂါပိုးကအသီးအနှံရဲ့အတွင်းသားမှာလှီးထုတ်လဲကျန်နေခဲ့လို့ မစားသင့်ပါ။ လင်းနို့ငှက်ကို Bat လို့ခေါ်တယ် လင်းနို့ငှက်ထက်ကြီးမားတဲ့ လင်းဆွဲငှက်ကို Flying foxe လို့ခေါ်တယ် ခိုငှက်ကို Pigeon လို့ခေါ်ပါတယ်… ဒီငှက်တွေကလူသားတွေနဲ့အနီးကပ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့အပြင်ဒီငှက်တွေကြောင့်လူသားတွေမှာ မထင်မှတ်တဲ့ ရောဂါပိုးများကူးစက်ခံရနိုင်သည့်အပြင် လူတွေရဲ့ ကျမ်းမာရေးကို ထိခိုက်လာနိုင်သည့်အပြင် အသက်ကိုလည်းသေစေနိုင်ပါတယ်… လင်နို့ငှက်နဲ့ လင်းဆွဲငှက်တွေမှာ ခွေးရူးပြန်ရောဂါပိုး Rabies Virus နဲ့အခြားရောဂါပိုးများကိုလည်း သယ်ဆောင်လာသည့်အပြင် လင်းနို့ / လင်းဆွဲနဲ့ ခို ချေး /သေး တို့က အဆုပ်ပြွန်နှင့်အသက်ရူလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့ Histoplasmosis( ဟစ်တိုပလပ်စ်မိုးဆစ်) မိူရောဂါပိုးများကိုလည်းကူးစက်ခံရတတ်ပါတယ် မိမိအိမ်၌ … Read more
စာသားတှကေ ကွမျးထျောနတောပဲ👍မိုကျတယျ…ရေးခကျြကို ကွိုကျလှနျးလို့ ကူးပွီးပွနျတငျတာ
စာသားတွေက ကြမ်းထော်နေတာပဲ… 👍မိုက်တယ် … ရေးချက်ကို ကြိုက်လို့ ကူးပြီးပြန်တင်တာ👌 သိန်း၈၀၀၀တန်ကားလက်ဆောင်ပေးတဲ့ ယောက်ျားကိုလိုချင်ရင် …. ကိုယ် ကိုယ်​တိုင်၌က ရုပ်ပိုင်းဆိုင်​ရာရော …. စိတ်ပိုင်းဆိုင်​ရာပါ အနည်းဆုံး တော့သိန်း ၄၀၀၀လောက်တန်အောင်ကြိုးစားကြပါ .. ကိုယ်တိုင်က ၁၀တန်းလည်းမအောင် ဝင်ငွေက တလ ၂သိန်းမပြည့် ၊ ရုပ်ရည်ကရွက်ကြမ်း ရည်ကြို …. မိဘကလည်း လက်လုပ် လက်စား ဘဝသမား …. အဲ့လိုလူမျိုးတွေက သိန်း ၈၀၀၀ တန် ကားလက်ဆောင်ပေးတဲ့postကို …. သူတို့ရည်းစား ကောင်လေးတွေဝေါမှာ လာလာ Tag ကြတာမြင်တော့ ငါ့တပည့်တွေအစားရင်နာမိတယ် ….. Ro ခွင့်ရှိတယ် Overtine ခွင့်မရှိဘူး။ လက်ချင်းချိတ်ပြီး 200 တန်​ YBS တူတူစီးရဲတဲ့ … Read more
သားကောငျးမိခငျ အိုးတှကေို ပုရိသတို့ တပျမကျကွတဲ့ အဓိကအကွောငျးအရငျး
တင်ပါးကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ပုရိသတို့ တပ်မက်ကြတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်း ဆေးပညာ အမြင်အရ တင်ပါး ကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ တခြား အမျိုးသမီးတွေထက် ဉာဏ်ရည်ထက် မြတ်ပြီး၊ သားကောင်းမိခင် ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေး ပိုတယ် လို့ ဆိုပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ယောက်ျားတွေကို စစ်တမ်း ကောက်ယူခဲ့ရာ မှာလည်း တင်ပါးကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ကိုသာ ပိုမို တပ်မက် ကြတယ်လို့ အဖြေထွက် ခဲ့ပါတယ်… အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ကတော့ တင်ပါး ကြီးမားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ပုရိသတွေ ဘာကြောင့် တပ်မက်ရ သလဲ ဆိုတာရဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဗဟုသုတ အနေနဲ့ မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ် … Read more
သားကောငျး သမီးကောငျး ရရှိစသေညျ့နညျးလမျးကာငျးမြား….
သားကောင်း/သမီးကောင်း ရရှိစေ သည့်နည်းလမ်းကာင်းများ (မိခင်လောင်း၊ ဖခင်လောင်းများဖတ်ပါ) ဦးဇင်းတို့အမေ မှားခဲ့တာတစ်ခု ရှိခဲ့တယ်။ဦးဇင်းတို့ ငယ်ငယ်တုံးက ပြောပြီးပြီ၊အရက်မသောက်တတ်ဘူး၊ ဆေးလိပ်မသောက်တတ်ဘူး ပြောသလိုဘဲ၊ဖဲမရိုက်တတ်ဘူးလို့ မပြောလိုဘူး … ဖဲရိုက်တတ်တယ်၊ဘာဖြစ်လို့ ဖဲရိုက်တတ်သလဲ ဆိုတော့ ဖဲရိုက်တာဝါသနာကို ပါလာတယ်။ အဲဒါကို ကြည့်ပြီးတော့၊အမေက ဘာပြောတယ်ဆိုတော့၊အိုး….“ငါ့သား, ငါ့သား” ငါ့သားဖဲရိုက်တတ်တာအမေ့ကြောင့်တဲ့။ အဖေနဲ့ အမေ အိမ်ထောင်ကျတော့ကိုယ့်အိုး၊ ကိုယ့်အိမ်လေးနဲ့ နေတဲ့အခါအရပ်ထဲမှာ နာရေးရှိလို့ အဖေ ဖဲသွားရိုက်ရင်အမေကလိုက်သွားတယ်၊ကိုယ်ကလဲ ပါသွားတယ်“ဗိုက်ထဲမှာ” (ရယ်မောသံများ…. )။ ရယ်စရာမောစရာ ပြောတာမဟုတ်၊အမေကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အခါ၊အမေလုပ်ချင်တာ သွားတဲ့ဆီကို အဲဒီကလေးက(မမြင်ရပေမယ့်) ဓါတ်ကူးသည်။ ပေါ့ပေါ့မလုပ်ပါနဲ့ ။အဲဒီအသိတွေ မရှိလို့လဲ ကိုယ့်သားသမီးကိုဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမှာလဲမသိတဲ့ အမေတွေ တစ်ပုံကြီး၊ အဲဒီ အသိတွေ မရှိလို့ ကိုယ့်သားသမီးကိုဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမှာလဲမသိတဲ့ အဖေတွေ တစ်ပုံကြီး။ ဦးဇင်းအမေ အဲဒီဟာလေးကိုသဘောပေါက် ကတည်းကနောင် … Read more
ခတျေအဆကျဆကျက တိုငျးရေးပွညျရေးကိစ်စတှမှော မုခမြှနျကနျခဲ့တဲ့ အတိတျနိမိတျတဘောငျ
ခေတ်အဆက်ဆက်က တိုင်းရေးပြည်ရေးကိစ္စတွေမှာ မုချမှန်ကန်ခဲ့တဲ့ အတိတ်နိမိတ်တဘောင်က အခုတစ်ခေါက်ရော ဘယ်လိုလာမလဲ (၁)ဟင်္သာမင်း အင်းကိုဆင်းမည်။ (၂)ထိုဟင်္သာကို မုဆိုးေ.လးနဲ့ခွင်းမည်။ (၃)မုဆိုးကို ထီးရိုးရို.က်လိမ့်မည်။ (၄)ထီးရိုးကို မိုးကြိုးပ.စ်လိမ့်မည်။ (၅)သံခမောက်ဆောင်း လေးယောက် ပေါ်လိမ့်မည်။(၆)ဧရာဝတီ ခန်းလိမ့်မည်။ (၇)လက်ပံလည်း ရှားလိမ့်မည်။ (၈)ကြက်မ တွန်လို့ မိုးလင်းမည်။ (၉)ဗုဒ္ဓရာဇာကိန်းနဲ့အညီ နန်းသိမ်းလိမ့်။ (၁၀)ဗုဒ္ဓရာဇာသာသနာပြု မင်းကောင်းမင်းမြတ် ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်း တိုင်းပြည်ကြီး စည်ကားသာယာ ဝပြောလိမ့်မည်။ ၁။ ဟင်္သာမင်း အင်းကိုဆင်းမည်။ဟံသာဝတီမွန်တို့ အင်းဝကို သိမ်းပိုက်လိမ့်မည်။ ဟင်္သာမှာ ဟံသာဝတီမွန်တို့၏ အမှတ်အသားဖြစ်ပြီး အင်းဆိုသည်မှာ အင်းဝကိုဆိုလိုသည်။ အင်းတို့၏အဝမှာရှိလို့ အင်းဝ(In Wa)၊ မြစ်တို့အင်းတို့၏ဆုံရာအဝမှာရှိလို့ အဝ(AVA)၊ အင်းကိုးအင်း အလယ်မှာရှိလို့ အင်းနဝ(Innwa)စသဖြင့် ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါသည်။ ၂။ ထိုဟင်္သာကို မုဆိုးေ.လးနဲ့ခွင်းမည်။ … Read more
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မြန်မာစုံတွဲ ကိုယ်တိုင်ရိုက်တွေ တနေ့ကို ၁၀ကားလောက် နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရတယ်…
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မြန်မာစုံတွဲ ချောင်းရိုက်တွေ ကိုယ်တိုင်ရိုက်တွေ တစ်နေ့ကို ၁၀ ကားလောက် နေ့စဉ် မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ အဲဒီကာယကံရှင် တွေရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်..အဲဒီကားတွေ မြင်တွေ့နေကြရမှာပါ …။ တစ်ချိန်မှာ ငါ့အဖေတွေ ငါ့အမေတွေဆိုပြီး သူတို့သားသမီးတွေလည်းမြင်နေကြ ရမှာဆိုတော့တွေးကြည့်ရင်….ပြသာနာအကြီးကြီးတွေပါ။မသိနားမလည်တဲ့ ညီမလေးများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ မြင်ရတွေ့ရတာတွေ စိတ်မကောင်းစရာတွေမို့ပါ…တစ်နေ့တစ်နေ့ ချက်ဘောက်ရီကွက်စ်ထဲမှာ လာအကြံဉာဏ်တောင်းကြတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျအများစုမှာ တူညီတဲ့အကြောင်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ချစ်သူနဲ့ အတူနေ နယ်ကျွံကြတဲ့အခါ မှတ်တမ်းတင်ခံရတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ ဆိုတာပါပဲ …။အချို့ဆို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဒီလူကို ဆက်လက်တွဲဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တာတောင်မှ ဒီလိုRecordတွေ ပေါက်ကြားမှာစိုးရိမ်လို့ ကြိတ်မှိတ်ရှေ့ဆက်နေရတာတွေ၊ အချို့ဆိုရင် လုံးဝပြတ်သွားပြီး သူ့စော်နဲ့သူ၊ ကိုယ့်ဘဲနဲ့ကိုယ် ဖြစ်နေတာတောင်မှ လှမ်းခေါ်ရင် သွားအိပ်ပေးရတဲ့ အခမဲ့ပြည့်တန်ဆာဘဝကို ရောက်မှန်းမသိ ရောက်နေရတဲ့ ရင်နာစရာ ဖြစ်ရပ်တွေ တကယ်ကြီးကို … Read more
သကျကွီးရှယျအို မီးရှို့ခံရတဲ့အထဲပါသှားလို့ မိသားစုဝငျတှရေဲ့ငိုကွှေးသံ (ရုပျသံ)
သက်ကြီးရွယ်အို မီးရှို့ခံရတဲ့အထဲပါသွားလို့ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ငိုကြွေးသံ (ရုပ်သံ) မကွေးတိုင်း ပေါက်မြို့နယ်တောင်ပိုင်း ကင်းမရွာ မီးလောင်တဲ့အထဲ ဦးမြမောင် နဲ့ ဒေါ်ကြီးမိန် တို့ ၂ ယောက် ပါသွားတာ လောလောဆယ် အတည်ပြုလို့ရပါတယ်,,, အရိုးပဲ ကျန်တော့တယ်လို့ ဒေသခံတစ်ဦးကပြောပါတယ်… လက်ရှိအချိန်မှာလည်း ကင်းမကျေးရွာ အတွင်းကို စစ်ကား ၃ စီးရောက်နေပြီး ဖမ်းဆီးခံရသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်… ကျေးရွာခံပြည်သူအများအပြားကတော့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်… မီးလောင်မှုမှာ လက်ရှိအတည်ပြုနိုင်တဲ့ အဘိုး၊အဘွား ၂ ယောက်အပြင်တခြားသက်ကြီးရွယ်အိုတွေလည်း သေဆုံးမှုရှ်ိနိုင်တဲ့အတွက် ထပ်မံသိရှိခဲ့ရပါက ဆက်ဖော်ပြပေးပါမယ်… သက်ကြီးရွယ်အို မီးရှို့ခံရတဲ့အထဲပါသွားလို့ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ငိုကြွေးသံ… မကွေးတိုင်း…ပေါက်မြို့နယ်တောင်ပိုင်း…ကင်းမရွာ ဇော်မင်းထိုက်(ကျေးလက်မြေ) ၁၆.၆.၂၀၂၁ Unicode Version မကှေးတိုငျး ပေါကျမွို့နယျတောငျပိုငျး ကငျးမရှာ မီးလောငျတဲ့အထဲ ဦးမွမောငျ နဲ့ ဒျေါကွီးမိနျ တို့ … Read more
မွနျမာလဆနျးရကျတှမှော ရှောကျရှကျကို စားပေးသငျ့ရတဲ့ အကွောငျးအရငျး
မြန်မာလဆန်းရက်တွေမှာ ရှောက်ရွက်ကိုစားထားရင် အဲဒီတစ်လလုံးလေမဖြတ်တော့ဘူးလို့ ရှေးရိုးစကားရှိပါတယ်။ ရှောက်ရွက်ကိုကြက်သွန်ဖြူ၊ငြုပ်ကောင်းတို့နဲ့ဟင်းခါးချက်ပြီးအမြဲတမ်းသောက်ပေးရင် လေငန်းရောဂါပျောက်ပါတယ်။ ဒါတင်ပဲလား? မဟုတ်ပါဘူး၊ကမ္ဘာပေါ်မှာအဖြစ်များပြီး၊အပျောက်နည်းတဲ့ ကင်ဆာရောဂါကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်၊ ရှောက်ရွက်ဟာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ မကြီးထွားနိုင်အောင်ကူညီပေးပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို ၃/၄ ကြိမ်စားသုံးပေးရုံနဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ရှောက်ရွက်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချနိုင်တဲ့ Astsiri အဆီဓာတ်တစ်မျိုးပါဝင်ပြီး သူ့ အနံ့က ဦးနှောက်ကို စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ချတဲ့ ဟော်မှုန်းတစ်မျိုးထုတ်လုပ်အောင် နှိုးဆွပေးတဲ့အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနေရသူများ အထူးစားသုံးသင့်ပါတယ်။ ရှောက်ရွက်မှာ ပိုးသတ်ဆေးလိုမျိုး ပိုးမွှားတွေကိုသေစေနိုင်တဲ့အစွမ်းလည်းရှိတဲ့အတွက် ဖျားနာနေရင် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ခံအားကျဆင်းနေရင် ရှောက်ရွက်ကို စားသုံးသင့်ပါတယ်။ ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ရေထဲကို ရှောက်ရွက်ခပ်ပြီး မနက်မိုးလင်းမှာသောက်ရင် ကိုယ်ခံအားကိုမြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ အဝလွန်၊အနေခက်၊ အလှပျက်ကာ အဆီပို၊ဗိုက်ခေါက်ထူနေကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊ ခါးသေးရင်ချီ၊စလင်းဘော်ဒီဖြစ်ပြီး လူတကာတွေ ပြန်လှည့်ငေးရလောက်အောင်ဖြစ်ချင်ရင်တော့လွယ်ပါတယ်။ ပုလင်းလွတ်တစ်လုံးမှာ ရှောက်ရွက် (အရင့်) ၁၁ ရွက် (တချို့က … Read more